Archive du 19-avril-2022
Tena tsy nisy mpitondra matikambo sy manao tanalahy fomba fijery sy fiasa tahaka ity kosa angamba tao anatin’ny 60 taona.
Hafa no lazaina anio, hafa no tenenina rahampitso, ary hafa mihitsy ny zavatra atao. Aiza ve ka ianao izao no milaza fa tsy ilaina sy mampahantra ny fitrosana amin’ny mpamatsy vola mahazatra ary tsy handroso i Madagasikara
Afaka mba mahalala menatra ve ?
Tsy ny hoe afaka manetry tena intsony angamba izao no tokony ho fanontaniana mipetraka fa tena hoe afala mba mahalala menatra tompoko azafady?
CORONAVIRUS 60% AMIN'NY MATY NO TSY VOAISA OFISIALY
Tao anatin'ny roa taona nisian'ny valanaretina, nahatratra 6 tapitrisa ireo olona namoy ny ainy. Io no antontan'isa ofisialy,
Antoko PSD Nahatsiaro ny faha 44 taona nahalasanan’ny filoha Tsiranana
Feno 44 taona ny 16 aprily teo (1978-2022) no nahalasanan’ny filoham-pirenen’ny repoblika voalohany teto Madagasikara, Philibert Tsiranana.
Paska nosembanin-drahona 6 no maty navadiky ny lakana tany Betafo
Nosembanin-drahona ny alatsinain'ny paska tany Betafo omaly. Nisehoana loza mantsy tao amin'ny farihin'i Tatamarinana.
Fetin'ny Paska Niezaka nifaly ny olona na dia sahirana aza
Be loatra ny fahasahiranan'ny Malagasy. Vao nipoitra ity taona vaovao 2022 ity dia ny fiakaran'ny vidin'entana no tena nikapoka ny isan-tokantrano antony iray tsy nahafahana nanangona mihitsy na dia kely monja aza.
Tsena sy fanjifana Tsy mahavelona intsony ny varotra akoho amam-borona
Tsy mahavelona intsony ny fivarotana akoho amam-borona, raha ny nambaran'ny mpivarotra tetsy Analakely ny sabotsy teo.
Zaza Ramandimbiarison “5% monja ny vola voasoratra mankany amin’ny faritra ”
Ny fitsanganan’i Kristy tamin’ny maty, “ny andron’ny Paska” dia fisehoan-javatra “tsy manam-paharoa” izay manome dikany izay rehetra niseho tany aloha sy ireo zavatra hiseho manaraka, ,
Fitantanana an'i Madagasikara Mila olona mahay fa tsy mpiala bala lava
Zary lasa fiarovan-tenan'ity Fitondram-panjakana ity ny fanilihana ny tsy fahombiazana. Taloha raha nolazaina fa ny mpanohitra no manakorontana sy misakana fampandrosoana,
By-pass Niha vitsy ireo mpitsangatsangana
Vitsy ireo mpitsangatsangana tazana teny amin'ny By pass omaly alatsinain'ny Paska raha oharina tamin'ny 3 taona lasa.
Bealanana Omena 200.000 Ar izay mahatratra ireo namotika ny Ceg
Nisy namotika ny Sabotsy hifoha alahadin'ny Paska teo ny Ceg manara-penitra ao Ambodiampana, distrikan'i Bealanana.
Faran’ny herinandro Nanao ny nataony indray ny JIRAMA
Amin’ilay tapatapaka kely isaky ny iray minitra. Ny sabotsy teo fotsiny angamba no efa im-polo fara faha keliny indrindra izany ny tolakandro tokony ho nanomboka tamin’ny 1 ora
Tanàna Masoandro ao Ambohitrabiby Ezahana hisarihana jiro anaty volana vitsivitsy
Taorian'ny fihaonana teo amin'ny minisitra sy ny ben'ny tanànan'ny kaominina Ambohidrabiby, ny pasitera Lazarisoa, ny marainan’ny 15 aprily teo dia nanapa-kevitra ny hidina an-kianja ny tenany
Ministeran’ny rano sy ny JIRAMA “Zava-dehibe amin’ny fahazoana rano ny fambolen-kazo”
« Fambolen-kazo, fanarenana ny loharano, antoky ny fiveloman'ny mponina ». Io no lohahevitra ho fiaraha-mientana nosafidian’ny fitondram-panjakana amin'izao taom-pambolen-kazo 2022 izao.
Alatsinain'ny paska Mahasarika olona hatrany i Mantasoa
Toerana isan'ny mahasarika olona i Mantasoa rehefa alatsinain'ny paska. Ambohipihaonan'ny olona an'arivony maro na mety ho an'aliny aza rehefa fotoam-pitsatsanganana tahaka ny paska sy pantekosta.
Indostria ao Ambatofinandrahana Manomboka miakatra ny menaka
Iray amin'ireo indostria madinika hita ao Ambatofinanandrahana ny ozinina fanodinana ny voanjo ho lasa menaka.